Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo dib ula wareegay magaalada Marka | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa goor dhow dib ula wareegay magaalada Marka, maalin kadib markii Al-Shabaab ay qabsatay saddex sano kadib.
Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda, AMISOM iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay duleedka Marka iyo xaafadaha qaar, iyadoo markii dambe Ciidamada la wareegeen.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay labo jiho ka galeen Marka, kuwaasoo kala ah dhanka Buufow iyo Ceel-Jaalle.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac kala gaaray, hase ahaatee warar aanu heleyno ayaa sheegaya in gaari dagaal ee ay lahaayeen Ciidamada dowladda lala eegtay qarax miino, ka hor inta aanay magaalada gelin.
Al-Shabaab ayaa muddo 24-saac ku sugnaa magaalada Marka, kadib markii shalay duhurkii gudaha u galeen, waxaana xalay dadka ku soo rogeen amaro ah in aan la dhageysan karin muusiga iyo in hubka soo wareejiyeen beelihii horay ugu dagaalamay magaalada.
Su’aalo badan ayaa la iska weydiinayay sababaha Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM isaga baxeen Marka, iyadoo Shabaab si nabadgelyo ah kula wareegtay magaaladaas oo ah mid istiraatiiji ah.